धुर्मुस सुन्तलीले रुदै ढोगे दर्शकलाई ! सक्किगोनि टिम नै भेटिए हलमा…..(भिडियो सहित) «
धुर्मुस सुन्तलीले रुदै ढोगे दर्शकलाई ! सक्किगोनि टिम नै भेटिए हलमा…..(भिडियो सहित)
Published : 21 February, 2020 12:04 pm
सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले निर्माण गरेको चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । चलचित्रमा धुर्मुस-सुन्तलीसँगै दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, विल्सन बिक्रम राई, कमलमणि नेपाल, राजाराम पौडेल, वसन्त भट्ट, सूर्यमाला खनाल लगायतको अभिनय छ ।
रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा रहेको चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’मा राजनराज शिवाकोटी र कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत, शैलेन्द्र डी कार्कीको छायांकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन, कुमार कट्टेल र दीपक आचार्यको लेखन रहेको छ ।
यस्तै डिन्डु लामा निर्माताको रुपमा रहँदा फूर्पा लामा सह–निर्माताको रुपमा छन् । ‘सेन्टी भाइरस’ले दिने मुनाफाको २० प्रतिशत सामाजिक कार्यमा लगाउने निर्माण पक्षले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । धुर्मुस सुन्तली हलमा पुग्दा दर्शकको प्रतिकियाले आँखाभरि आँसु बनाउदै रोएका छन ! हेर्नुस भिडियो :